လူသူမနီးတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းမှာ သင်တစ်ယောက်တည်း ရှင်သန်နိုင်မလား ? | Buzzy
လူသူမနီးတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းမှာ သင်တစ်ယောက်တည်း ရှင်သန်နိုင်မလား ?
မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်ပါ ၊ သင်ကိုယ့်သင် လွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ထားသလား ?
ပထမဆုံး ကျွန်းပေါ်မှာ သင်ဘာလုပ်မလဲ ?
နေဖို့ နေရာတစ်ခု ဖန်တီးမယ်
အိပ်စက်ဖို့ နေရာ /အကာအကွယ်ကို ဘယ်မှာ ဆောက်မလဲ ?
ကျွန်းပေါ်မှာ သင်အကြောက်ဆုံးက ဘာဖြစ်မလဲ ?
You got: You wouldn’t last long at all
သင်ဟာ ဘယ်လိုမှ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး ။ ကျွန်းပေါ်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် ရှောသွားဖို့ များပါတယ် ၊ ဥပမာ အုန်းသီးခေါင်းပေါ် ပြုတ်ကျတာကို မရှောင်နိုင်တာမျိုးပေါ့ :P
You got: You’d survive!
သင်ဟာ သေချာပေါက် လွတ်မြောက်မယ့် သူပါ ၊ ကျွန်းပေါ်ရောက်ကာစ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေပေမယ့် ၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သင်ဟာ တွေ့တဲ့ပစ္စည်းကို အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး အသုံးချပြီး နောက်ဆုံးမှာ လွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
You got: You’d do well at first, but you wouldn’t make it in the end
သင်ဟာ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်လောက် ကြိုးစားပြီး ရှင်သန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ် ၊ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ အခြေအနေတွေက ဆိုးရွားလာပြီး မုန်တိုင်းလို သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကြောင့် သင်ရှင်သန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ ၊ သင်အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့သားပဲ။
You got: You’reanatural!
ဒီကျွန်းပေါ်မှာ နေထိုင်ဖို့ သင့်ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းတွေက အံ့ဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ၊ သင်က ဒီကျွန်းပေါ်မှာ နေထိုင်ရ အဆင်ပြေသလို နေထိုင်ရတာကိုလည်း နှစ်သက်ကောင်း နှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်။